बिहार राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी, किन चर्चामा छिन् पुष्पम प्रिया चौधरी? - Malayakhabar
होम पेज विश्व बिहार राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी, किन चर्चामा छिन् पुष्पम प्रिया चौधरी?
बिहार राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी, किन चर्चामा छिन् पुष्पम प्रिया चौधरी?
एजेन्सी:= नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहार राज्यमा अहिले विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । बिहारमा अक्टोबर २८, नोभेम्बर ३ र ७ गरी तीन चरणमा यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । २४३ सिटको लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको प्रचारमा अहिले राजनीतिक दलहरु लागिपरेका छन् । यसैक्रममा नयाँ धारको राजनीतिका लागि आएकी नेतृ अहिले चर्चामा छिन्।
चर्चामा रहेकी नेतृको नाम हो – पुष्पम प्रिया चौधरी । पुष्पम प्रिया चौधरी लण्डन स्कुल अफ इकानोमिक्सबाट आफ्नो पढाइ पूरा गरेर राजनीतिमा आएकी नेतृ हुन् । उनले अहिले आफ्नै प्लुरल्स पार्टीको स्थापना गरेकी छिन् र चुनावी मैदानमा होमिएकी छिन् । चौधरीको लागि राजनीति नौलो विषय भने होइन । उनका पिता दिलिप चौधरी जेडीयूका नेता हुन् । अहिले उनी विधानसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नितिन नवीनसँग निर्वाचन लड्दैछिन्।
जातीय राजनीतिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य
पुष्पम प्रिया चौधरी लामो समयदेखि बिहारमा चल्दै आएको जातीय राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथमा निर्वाचनमा होमिएकी छिन् । बिहारमा जातीय भेदभाव तथा जातीय असमानताले जरो गाडेको छ । उनले जातीय राजनीतिक अन्त्यका लागि आफ्नो जातमा राजनीतिज्ञ र धर्ममा बिहारी लेखेकी छिन् । उनले अहिले चालेको नयाँ प्रयोग पनि चर्चाको विषय बनेको छ । चौधरी आफूलाई कुनै पनि जाति वा धर्मसमुदायको कारण नभई आफ्नो नीतिको कारण मतदान गरुन् भन्ने चाहेको बताउँछिन् । जातजाति कर्मको आधारमा हुनुपर्ने भए पनि जातीय भेद्भाव भने हुन नहुने उनको भनाइ छ । यस किसिमको भेदभाव नीतिगतरुपमा विपन्न परिवारलाई आर्थिक अवसरको माध्यमबाट जातीय भेद्भाव हटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
चौधरी भन्छिन्, ‘सच्चा वामपन्थी हुनुको अर्थ हो, तपाईं कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारसँग सम्झौता गर्नुहुन्न ।’ त्यसो त भारतमा यसअघि पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाउने भन्दै धेरै नेताहरु नआएका भने होइनन् । तर, कालान्तरमा उनीहरु पनि अहिलेकै राजनीतिमा सामेल भएका छन् । चौधरीको अवस्था पनि यस्तै हुने त होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफू नयाँ योजना र भिजनसहित राजनीतिमा आएको र यसअघि कसले के गर्‍यो ? भन्ने कुराको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने बताइन्।
चौधरीको नयाँ किसिमको राजनीतिक अभ्यासमा अहिले बिहारका डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापकलागायतको समूहले पनि उनलाई साथ दिइरहेका छन् । उनीहरुले यो निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
भारतमा निर्वाचनमा उठेकामध्ये कसैलाई पनि ‘म रुचाउँदिनँ’ भन्ने अधिकार छ । त्यस्ता मानिसले ‘नोटा’ मा भोट दिन्छन् । बिहारमा सबैभन्दा धेरै नोटा भोट खस्ने गरेको छ । गत विधानसभा निर्वाचनमा बिहारको ३८ सिटमा नोटो तेस्रो स्थानमा थियो । समग्र बिहारमा सात लाख ६१ हजार मतदाताले नोटाको बटन थिचेका थिए । लोकसभाको निर्वाचनमा यो संख्या बढेर आठ लाख १७ हजार पुगेको थियो । यसको अर्थ बिहारका धेरै मतदाताहरु अहिले चुनावी मैदानमा रहेका नेताहरुप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यस्तोमा पुष्पम प्रिया चौधरी नोटा भोट दिने मानिसहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा देखिएकी छिन्।
(भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा )
अघिल्लो लेख विमान थपेर नेपाल एयरलाइन्सलाई नाफामा लैजाने नवनियुक्त महाप्रबन्धक डिमप्रसादको उदघोष।
पछिल्लो लेख अक्टोबर १४ तारिखदेखी सिएमसिओमा मलेसियन प्रहरीले सडक अवरोध गर्ने,चेकजाँचमा कडाई गर्ने।
भारतको नयाँ युद्ध रणनीति : निहुँ खोज्यो भने उसकै भूमिमा गएर आक्रमण गर्ने।